Kubva musi waMay 15 kusvika 17, kambani yedu yakapinda kuratidziro yeVitafoods yakaitirwa kuGeneva, Switzerland. Chiratidziro chiitiko chakakosha cheindasitiri muEuropean indasitiri yezvikafu nemakumi ezviuru zvevatori vechikamu. Kuburikidza pashoo iyi, tine mukana kuitisa takatarisana chiso com ...
ne admin pane 19-07-27
Kubva munaGunyana 11 kusvika 13, 2019, kambani yedu yakapinda muchiratidziro cheKudya Zvezvinhu zveAsia zvakaitirwa muBangkok, Thailand. Chiratidziro chiitiko chakakosha cheindasitiri muindasitiri yezvokudya zveAsia, nemakumi ezviuru zvevatori vechikamu. Thailand ine mukana wakakura wemusika, kunyanya ...
Kubva Mbudzi 26 kusvika 28, 2019, kambani yedu vakapinda CPHI pashoo yakaitirwa New Delhi, India. Chiratidziro chiitiko chakakosha cheindasitiri muAsia mishonga uye indasitiri yezvikafu, nemakumi ezviuru zvevatori vechikamu. India ine mikana yakakura yemusika, kunyanya mu ...
Kubva munaNovember 5 kusvika 7, 2019, isu takatora chikamu muCPHI kuratidzwa kwakaitirwa muFrankfurt, Germany. Chiratidziro chiratidziro ine indasitiri ine mukurumbira muEuropean mishonga uye indasitiri yezvikafu, nemakumi ezviuru zvevatori vechikamu Europe ine mikana yakakura yemusika, kunyanya mumitambo ...